Ụlọ ọrụ mmepụta ihe kacha mma Testosterone Isocapronate ntụ ntụ
/ ngwaahịa / testosterone / Testosterone Isocapronate ntụ ntụ
AASraw bụ ọkachamara ọkachamara nke Testosterone Isocapronate ntụ ntụ nke nwere ụlọ nyocha onwe ya na nnukwu ụlọ ọrụ dị ka nkwado, a ga-arụ ọrụ niile n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro njikwa mma. Sistemụ ọkọnọ kwụsiri ike, ma azụmaahịa azụmaahịa na iwu n'ogbe bụ nke a na-anabata.
Product aha: Testosterone Isocaproate ntụ ntụ
Nọmba CAS: 15262-86-9
Molekụla Formula: C25H38O3
Ọbara arọ: 386.576 g / mol
Testosterone Isocaproate ntụ ntụ
Testosterone Isocaproate bụ homonụ anabolic nke na-achịkwa mmepe nke mọzụlụ, ọkpụkpụ, na akụkụ mmekọahụ. Ọ bụ ezie na ọ dị mkpa maka uto nwoke na ọtụtụ njirimara nwoke, a na-ahụkwa ya na ọkwa dị ala na ụmụ nwanyị. Ọkwa testosterone na-abawanye n'oge uto, wee malite ibelata mgbe ọ bụ nwata. Hypogonadism, ma ọ bụ ọkwa dị ala nke Testosterone, na-emetụtakarị ụmụ nwoke, mana ụmụ nwanyị nwekwara ike ịta ahụhụ site na ọnọdụ ahụ. Ejikọtara Testosterone dị ala na mbelata ahụ ike, obere libido, na nnukwu ihe ize ndụ nke ọrịa obi. N'ihi nke a, enwere ọtụtụ uru na ịkwalite Testosterone Isocaproate.
N'ime ọtụtụ ọrụ ya na ahụ, Testosterone Isocaproate na-akpali mmepụta nke mkpụrụ ndụ ọbara uhie, nke na-enyere aka inye oxygen na akwara na akụkụ ahụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ mkpụrụ ndụ ọbara uhie nwere ike ịkpata ihe ize ndụ nke ya, obere obere ego, ma ọ bụ anaemia, nwere ike ịkpata mmebi akụkụ ahụ ma ọ bụ nsogbu ahụike ndị ọzọ. Nnyocha achọpụtala na ọgwụgwọ Testosterone Isocaproate nwere ike inye aka dozie anaemia.
Testosterone Isocaproate ọgwụgwọ dị ka eke hormone nnọchi ka a chọpụtakwara na-amụba ọkpụkpụ-mineral njupụta. Ọkpụkpụ ọkpụkpụ na-ebelata karịa afọ, na-ebuli ohere nke ọkpụkpụ ọkpụkpụ. Ịkwalite Testosterone Isocaproate gị nwere ike ime ka ọkpụkpụ gị sie ike, nke na-enyekwa nhazi na nchebe maka akụkụ ahụ gị.
Enwere ihe kpatara na steroid n'ozuzu na-ewu ewu n'etiti ndị na-eme egwuregwu. Testosterone Isocaproate bụ steroid na-emekarị nke nwere ike ịbawanye ma nọgide na-enwe oke ahụ. N'ikpeazụ, ọ na-edugakwa na ike karịa na mbelata nke oke abụba. Ịmejuputa usoro ọzụzụ ike mgbe niile nwere ike ime ka uru ya dịkwuo elu, n'ihi na nke a na-arụ ọrụ na-ebuli ọkwa Testosterone. Nke a na-enye aka na mmega ahụ na-arụpụta ihe nke nwere ike nweta uru ahụike ọzọ.
Nnukwu ahụ dị mma yana ọkwa ume ka mma nwekwara ike inwe mmetụta dị mma na ahụike uche gị. A na-ejikarị ike ọgwụgwụ, mfu nke libido, na ihe mgbaàmà nke nnukwu ịda mbà n'obi mara hypogonadism. Nnyocha achọpụtala na ọgwụgwọ ọgwụgwọ Testosterone Isocaproate belatara mgbaàmà ndị a, ọ pụkwara ọbụna ịbụ ọgwụgwọ na-egbochi ịda mbà n'obi dị irè.
Na mgbakwunye na ahụike uche gị na ọnọdụ zuru oke, Testosterone Isocaproate nwere ike ịbara ụbụrụ uru n'ụzọ ndị ọzọ. Nnyocha achọpụtala njikọ dị n'etiti ọkwa dị elu nke Testosterone na mbelata ihe ize ndụ nke ọrịa Alzheimer. Nleba anya nke Testosterone Isocaproate nwekwara ike inye aka mee ka ebe nchekwa dịkwuo mma na ọrụ ọgụgụ isi, gụnyere ikike ohere.
Ọ bụ ezie na ọmụmụ ihe na-aga n'ihu, ihe àmà na-egosi na Testosterone Isocaproate nwere ike inye aka n'ịgwọ na igbochi ụfọdụ ọrịa obi. A na-ejikọta ọkwa testosterone dị ala na nnukwu ihe ize ndụ nke ọrịa obi. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi na ihe ndị ọzọ, dị ka oke ibu, jikọtara ya na ọkwa dị ala nke Testosterone. Otú ọ dị, ndị nchọpụta na-agbalị ugbu a iji kwado mmetụta nke Testosterone Isocaproate therapy na ahụike obi.
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ uru na ịkwalite Testosterone Isocaproate, ọ dị mkpa ijide n'aka na usoro ọgwụgwọ ahụ dị mma iji zere mmetụta ọ bụla. Na mgbakwunye na gels, patches akpụkpọ, na injections, enwere ọtụtụ nkwalite Testosterone Isocaproate dị, gụnyere mgbakwunye creatine, nke na-achọghị ndenye ọgwụ. Ụfọdụ nri na vitamin nwekwara ike inyere gị aka ịbawanye ọkwa Testosterone gị, gụnyere vitamin D, zinc, tuna, na àkwá. N'ozuzu, nri ezi uche dị na ya na usoro ọzụzụ ọzụzụ ike bụ isi nwere ike inyere gị aka ịkwalite ma nọgide na-enwe ahụike nke Testosterone Isocaproate. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-enyo hypogonadism, gwa dọkịta gị gbasara ọgwụgwọ ọgwụgwọ Testosterone Isocaproate.
Testosterone Isocaproate ntụ ntụ uru
Ọkwa ike dị elu
Testosterone Isocaproate bụ ihe dị mkpa na ọkwa ike kwa ụbọchị n'ihi ọrụ ya na mmepụta nke mkpụrụ ndụ ọbara uhie. Selụ ndị a dị mkpa na-enye ahụ oxygen ma nyere aka ịtụgharị abụba na carbohydrates ka ọ bụrụ ike. N'ihi ya, ndị ikom nwere obere Testosterone njedebe na-enweta oke ike ọgwụgwụ nke uche na nke anụ ahụ. Ọ bụ ezie na ike gwụrụ gị mgbe ụfọdụ n'ihi ụbọchị nrụgide ma ọ bụ enweghị ụra, ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ bụrụ na ị na-enwe ike ọgwụgwụ na-adịghị ala ala mgbe ahụ ọkwa testosterone dị ala nwere ike ịbụ ụta. Otú ọ dị, ọgwụgwọ ngbanwe nwere ike iweghachite ọkwa dị ala na nkịtị, na-eme ka ume na ume dị ike. Otu ị nwetara mmetụta dị ike, ị ga na-asị "ee" na mgbatị ahụ ma ọ bụ gburugburu gọọlfụ n'oge na-adịghị anya!
Ọchịchọ Mmekọahụ na arụmọrụ emelitere
Ọ bụrụ na ị na-enwe mmetụta mmekọahụ dị ala karịa ka ọ na-adị, ị nwere ike ịchọ ileba anya na Testosterone Isocaproate nnọchi ọgwụgwọ iji nwetaghachi libido kacha mma. Ọkwa testosterone dị ala nwere ike imebi ahụike nwoke na nwanyị, na-eduga n'ịbelata agụụ na arụrụ arụ erectile. Nnyocha e gosipụtara na Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, chọpụtara na libido na ọkwa Testosterone nwere njikọ siri ike. Nchoputa a choputara na isiokwu ndi kọwara inwe agụụ mmekọahụ dị ala nwere ohere dị elu nke inwe testosterone dị ala. Mgbe ọkwa dị ala weghachiri eweghachi, ndị ikom ahụ nwetara mmasị na ọrụ mmekọahụ ka mma, na-enye ha ohere ịmaliteghachi ndụ mmekọahụ ha!
Mmụba Ike Muscular
Na-ele anya na eme ka ahụ ike ma kpụrụ aru gi? Nke ahụ nwere ike ịbụ ihe siri ike ma ọ bụrụ na ị na-ebi na T. Testosterone Isocaproate dị ala na-arụ ọrụ dị mkpa na njikọ protein muscle, nke na-edozi mmebi ahụ nke anụ ahụ kpatara site na ibuli ibu na mmega ahụ na-eduga n'ịba ụba anụ ahụ. Otu nnyocha na-atụle mmetụta nke Testosterone Isocaproate na ike, chọpụtara na ọkpụkpụ anụ ahụ mụbara site na nkezi nke 20% na nyocha itoolu niile mgbe ọ natachara doses nke hormone nwoke. Mgbe ejikọtara ya na nri kwesịrị ekwesị na mmega ahụ, ị ​​nwere ike ịtụ anya ịmepụta anụ ahụ siri ike mgbe ị weghachite ọkwa Testosterone gị.
Ị maara na na mgbakwunye na ụba muscular ike, Testosterone Isocaproate nwekwara ike inye aka na abụba ọnwụ? Dị ka otu nnyocha si kwuo, ndị ikom na-ezughị ezu na Testosterone Isocaproate bụ ndị natara ọgwụgwọ ngbanwe nwere mbelata ma n'úkwù na BMI. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi na ndị ikom nwere ụbara ahụ ike na anụ ahụ na-ere ọkụ karịa calorie, ọbụlagodi na ezumike.
Ndị ikom buru oke ibu ma ọ bụ buru ibu nwere ike inwe ọkwa testosterone dị ala ebe ọ bụ na mkpụrụ ndụ abụba nwere ike gbanwee Testosterone Isocaproate n'ime estrogen (hormone mmekọahụ nwanyị). Ebe ọ bụ na ị nọ n'ihe ize ndụ nke obere T ma ọ bụrụ na ị nọ n'ịdị arọ dị elu, ọ kacha mma ka ịlele ọkwa gị iji hụ ma ọ bụrụ na Testosterone dị ala bụ ihe na-enye aka.
Ọrụ Uche Kachasịnụ
Testosterone Isocaproate na-arụ ọrụ dị mkpa na arụmọrụ ọgụgụ isi. Dị ka nchọpụta si kwuo, Testosterone Isocaproate ngbanwe emewo ka ọrụ uche na-abawanye na akụkụ nke mgbakọ na mwepụ, ncheta okwu, na itinye uche. Na mgbakwunye, e gosipụtara ọgwụgwọ Testosterone Isocaproate iji belata ohere nke ịmalite ịda mbà n'obi na ọrịa Alzheimer na ndị agadi. Ya mere, ọ dị mkpa idobe ọkwa Testosterone gị iji chebe ahụike ụbụrụ gị.
Enyemaka Nchegbu na Mmelite Obi
N'adịghị ka nkwenkwe a ma ama na Testosterone Isocaproate na-eme ka ụmụ nwoke na-eme ihe ike na iwe, hormone ahụ na-eme ka ọnọdụ ụmụ nwoke dịkwuo mma. Dị ka nchọpụta sayensị si kwuo, e kwubiri na Testosterone Isocaproate mere ka mmetụta dị mma na enyi na enyi dịkwuo mma ma belata mmetụta nke mgbakasị ahụ, nchekasị, iwe, na ụjọ. A na-eche na Testosterone Isocaproate ọgwụgwọ nnọchi nwere ike iji dị ka ọgwụgwọ antidepressant maka ụmụ nwoke.
Mbelata ihe ize ndụ nke nkụchi obi, ọrịa strok, na ọnwụ
Ị maara na Testosterone Isocaproate nwere ike imezi ahụike obi na ụmụ nwoke? Dị ka e kwuru na mbụ, Testosterone Isocaproate na-arụ ọrụ dị mkpa na mmepụta ọbara ọbara uhie. Ọkwa dị ala nke mkpụrụ ndụ isi ndị a nwere ike imetụta ahụike obi na-adịghị mma, na-eduga n'ihe ize ndụ dị ukwuu nke ọnọdụ ahụike obi dị iche iche na ọrịa dịka ọrịa akwara obi na nkụchi obi.
N'ụzọ dị mma, nchọpụta sayensị egosiwo nkwa na ibelata ihe ize ndụ a site na iji Testosterone Isocaproate nnọchi ọgwụgwọ iji weghachite ọkwa dị ala na nkịtị. N'ezie, akwụkwọ akụkọ European Heart Journal nke ihe karịrị ndị ọrịa 83,000 chọpụtara na ndị ikom ndị e weghachiri eweghachi Testosterone dị ala site na iji Testosterone Isocaproate nnọchi ọgwụgwọ nwere obere ihe ize ndụ nke nkụchi obi, ọrịa strok, na ọbụna ọnwụ ma e jiri ya tụnyere ndị ikom na-adịghị agwọ ọrịa. Dochie ọkwa testosterone dị ala dị mkpa iji bie ogologo ndụ na ahụike.
ịzụta Testosterone Isocaproate ntụ ntụ
Enwere ọtụtụ testosterone phenylpropionate suppliers dị ma online na n'ụlọ ahịa anụ ahụ gburugburu ụwa. Otú ọ dị, ịkwesịrị ịkpachara anya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta ọgwụ dị elu nke ga-eme ka ị nweta nsonaazụ dị mma site na njedebe nke usoro gị. Ọ bụghị onye nrụpụta phenylpropionate testosterone ọ bụla ị na-ahụ n'ịntanetị bụ ezigbo, ụfọdụ nọ ebe ahụ iji nweta ego, na ha anaghị eche maka nsonaazụ ị ga-enweta mgbe ị were usoro onunu. Tupu ịzụta testosterone phenylpropionate, buru ụzọ mee nyocha gị. Jide n'aka na ị ghọtara otú testosterone phenylpropionate supplier si arụ ọrụ tupu ị mee ihe ọ bụla. Gụọ nyocha ndị ahịa dị iche iche yana ilele ọkwa ụlọ ọrụ.
Anyị bụ ndị na-eduga testosterone phenylpropionate soplaya na emeputa na mpaghara. Webụsaịtị anyị bụ enyi na enyi, yabụ ị nwere ike iji ekwentị gị, mbadamba ma ọ bụ desktọpụ gị mee ka ọ dị mfe site na ntụsara ahụ nke ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị. Anyị na-ahụ mgbe niile na anyị na-ebuga ngwaahịa niile n'ime obere oge enwere ike. Ị nwere ike ịzụta testosterone phenylpropionate ntụ ntụ na nnukwu ma ọ bụ dị nnọọ ezuru gị bulking ma ọ bụ ịcha cycles. Cheta, n'agbanyeghị otú ị nwere ike isi nweta ọgwụ ahụ n'ụzọ dị mfe, amalitela ịṅụ ya na-enweghị nduzi dọkịta gị.
 Haynes WM, ed. (2011). Akwụkwọ aka CRC nke Chemistry na Physics (edemede 92). CRC Pịa. p. 3.304. ISBN 978-1439855119.
 Sapienza P, Zingales L, Maestripieri D (Septemba 2009). "Ezigbo nwoke na nwanyị na-asọ oyi n'ihe ize ndụ ego na nhọrọ ọrụ na-emetụta testosterone".
 Gịnị ka amachibidoro ”. World Anti-Doping Agency. Edebere site na izizi na Nọvemba 12, 2020. Eweghachitere Julaị 18, 2021.
 Wright J, Ellis L, Beaver K (2009). Akwụkwọ ntuziaka mpụ jikọtara ya. San Diego: Academic Press. 208–10. ISBN 978-0-12-373612-3.
 Dabbs M, Dabbs JM (2000). Ndị dike, ndị rogues, na ndị hụrụ n'anya: testosterone na omume. New York: McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-135739-5.
Dehydroepiandrosterone ntụ ntụ
Nootropics ntụ ntụ (8)
Ọla abụba (3)
Steroid ntụ ntụ (26)
06 / 26 / 2022 Mmmmmmmmmmmm
Kedu ihe bụ Oxandrolone ntụ ntụ eji?
11 / 08 / 2017 Mmmmmmmmmmmm
06 / 25 / 2022 Mmmmmmmmmmmm
06 / 23 / 2022 Mmmmmmmmmmmm
06 / 20 / 2022 Mmmmmmmmmmmm
06 / 19 / 2022 Mmmmmmmmmmmm